Warbixin: Mareykanka oo Qiray inay Saraakiil ka joogaan gudaha Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Warbixin: Mareykanka oo Qiray inay Saraakiil ka joogaan gudaha Soomaaliya
Nairobi (KON) - Mareykanka ayaa markii ugu horeysay si toos ah u shaaciyay in xubno Milateri kaga sugan yihin Soomaaliya, sidaas waxaa Jaraa'idka Dalkaasi u sheegay Saraakiil Mareykan.
Saraakiil Mareykan ah oo Wareysi siiyay Wargeyska Caanka ah ee Washington Post ayaa Qirtay in Dowladda Mareykanka ay Soomaaliya u dirtay Ciidammo, Ciidamadaasna ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya.
Waa markii ugu horeysay uu Sarkaal Mareykan ah ama Dowladda Mareykanka ay si toos ah uga hadlaan Ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Afhayeenka Taliska Saldhiga Maraykanka ee qaaradda Afrika Colonel Tom Davis ayaa xaqiijiyay in la-taliyeyaal milliteri ay Dowladda Mareykanka ka joogaan Dalka Soomaaliya, wuxuu sheegay in ay la shaqeeyaan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyo Dowladda Federaalka.
Sarkaalkaan ayaa sheegay in Xubnaha Milateriga ah la geeyay magaalada Muqdisho bishii October, ayagoo Shaqadooda bilaabeen bishii December ee lasoo dhaafay.
Waxaa la aaminsanyahay oo ay Keydmedia Online iyo Wargeysyadda Yurub soo Qoreen Sanad kahor in xiligii Dowladdii Sheikh Shariif kahor, Mareykanku ay Ciidamo ka joogeen Dalka Soomaaliya.
11-kii Bishii Maarso ee Sanadkii 2011 ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde lagu arkay 10 Sarkaal oo Mareykan ah, kuwaasoo la geeyay Xarunta AMISOM ee Magaalada Muqdisho.
Keydmedia Online oo xiganeysa Jaraa'idka reer Galbeedka sida Wargeyska Daily Star oo ka soo baxa Dalka Britain ama Der Freitag oo kasoo baxa Dalka Jarmalka ayaa soo Qortay Sanad kahor in laga yaabo in Ciidamo si gaar ah u tababaran oo Mareykan ah losoo diro Soomaaliya.
Ayadoo mudooyinkii ugu dambeeyay ay isa soo tareysay tuhun ah inay jiraan Ciidamo ka socda Wadamada reer Galbeedka inay ka howlgallaan gudaha Soomaaliya, ayaa waxaa uu tuhunkaaso noqday mid aan shaki ku jirin hada.